Haintrano goavana teny Ambohipo: lavenona, korontam-by sisa ireo moto anjatony, fiara 6… | NewsMada
Haintrano goavana teny Ambohipo: lavenona, korontam-by sisa ireo moto anjatony, fiara 6…
Ankoatra ireo trano hazo sy trano biriky maromaro, lavenona sy korontam-by sisa ireo fiarakodia enina sy moto anjatony kilan’ny afo, ny alin’ny alahady hifoha alatsinainy teo, teny Ambohipo.
Nisehoana firehetana nahamaizana moto miisa 105, fiara enina nahitana 4×4 sy Golf IV, trano roa ka mpivarotra pizza ny iray tamin’ireo may ireo, teny amin’ny parking Ambohipo. Kila forehitra ireo rehetra ireo, sarotra ny famonoana afo noho ny fisian’ny lasantsy sy ireo akora mora mandray afo rehetra.
Araka ny fanazavan’ny olona eny an-toerana sy ny ao amin’ny fokontany, niainga tamin’ny trano hazo iray teny an-toerana ny afo. “Nisy labozia nirehitra tao amin’io trano hazo io, nitarika ny firehetana io ka nahazo “balle”-ana friperia maromaro, nahazo ny hazo fisaka avy eo ary nianjera tamin’ny moto. Nirehitra haingana ireo ary nipoapoaka nifanesy”, hoy ny filazan’ny olona eny an-toerana. Tao anatin’ny fotoana fohy, nahazo ireo fiara miisa enina tao anaty parking ihany koa ny afo, ary niafara teo amin’ny mpivarotra pizza.
Nivoaka avokoa ny olona teny an-toerana, ny tompon’ny moto sy ny fiara, nihiakiaka sns, saingy tsy nisy azo natao intsony.
Tonga ihany koa ny mpamonjy voina nanao ny asany fa sahirana tamin’ny famonoana ny afo. Nisy rahateo ny tsy fahampiana fitaovana. Efa ora maro taty aoriana vao maty ny afo. Tonga teny an-toerana ihany koa ny polisy. Voalazan’ny olona eny an-toerana fa mbola nisy ihany koa ny nanararaotra nangalatra ireo sisa tsy may. Mbola nisy moto telo ihany koa very nandritra ity loza ity. Tsy kely lalana ny ratsy.
Manao taratasy ny olona
Manoloana ity tranga ity, manao taratasy avokoa ireo tompon’ny moto sy fiara may. Manantena ny amin’ny fisian’ny antoka. Raha ny fanazavana azo aloha, fametrahana moto sy fiara andoavam-bola ny eo amin’ny parking Ambohipo, saingy tsy misy antoka izany. Toe-javatra efa mpiseho amin’ny faritra maro eto an-dRenivohitra ny tsy fisiana parking. Raha misy, mitovy amin’ity eny Ambohipo ity ihany. Ny ankamaroan’ny olona aza, mametraka fiara eny amoron-dalana rehetra eny. Rehefa mitranga ny loza, tahaka ity teny Ambohipo ity, miala maina ny tompona fiara sy ny moto.
Miandry izay ho tohin’ny raharaha ny rehetra eny Ambohipo. Na miala maina, na misy ihany ny fandraisana andraikitra amin’ny trano fiantohana, sns, satria loza tsy nahy no nitranga.